Madaxweynaha Galmudug iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sii jeeda Hobyo – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sii jeeda Hobyo
Madaxweynaha maamuul-goboleedka Galmudug, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sii jeeda degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Madaxweynaha oo ay socdaalkiisa ku wehliyaan xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa ka ambabaxay magaalada Cadaado, isagoo ku sii jeeda Hobyo, wuxuuna ku hakaday deegaanka Bacaadweyn oo uu kulamo kula qaatay mas’uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi.
Ujeedada Socdaalka madaxweynaha Galmudug uu ku tagayo magaalada Hobyo ayaa lagu sheegay in uu dhagax-dhigo dhismaha dekedda Hobyo oo lagu wado inuu billowdo dhawaan.
Dhaqaalaha ku baxaya dhismaha dekedda Hobyo ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka iyo bulshada Galmudug.
Dhismaha iyo hawl-galinta dekedda Hobyo ayaa haddii lagu guulaysto kaalin muqata ka qaadan doona kobcinta dhaqaalaha deegaannada hoos taga maamulka Galmudug.
Shaqaalaha Xafiiska R/Wasaaraha oo Sagootiyay Xildhibaan Cabdicasiis Cabdilaahi Yuusuf (Dhago-qool)+Sawirro
Wasiir Dhuubow “Wasaaraddu uma dulqaadan doonto in la hor istaago horumarinta Isboortiga” SAWIRRO